Farmaajo oo u Hoydey Uhuru Kenyatta, Safar Ujeedo Badan – Goobjoog News
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa maanta la sheegayaa inuu magaalada Nairobi ee xarunta Kenya ugu ambabaxay ka qeybgalka shir ujeedadiisu tahay in 2030-ka meel fiican laga gaaro qorshaha caafimaadka galmada iyo xadididda taranka. Mas’uuliyiinta shirkan ka qeybgalaya ayaa lagu wadaa iney balanqaad ka sameeyaan arrimihii lagu heshiisyey shirkii dadka iyo horumarka ee 1994.
Shirka ayaa diiradda lagu saari doonaa sidoo kale shan arrin oo kala ah: caafimaadka galmada iyo taranka oo qayb ka ah caafimaadka guud, maalgelinta loo baahan yahay in lagu xaqiijiyo dhammaan yoolalka barnaamijka ICPD, kala duwanaanshaha dadka iyo awooda ay u leedahay in lagu dhaqaaqo kobaca dhaqaalaha iyo horumarka joogtada ah, tillaabooyinka lagu soo afjari doono gacan-qaadka ku saleysan jinsiga iyo dhaqamada waxyeelada leh iyo xaquuqda daryeelka caafimaadka galmada iyo taranka iyo arrimo kale.
Warbixinta ururka UNFPA waxaa ku jirta iney jiraan in ka badan 232 million oo doonaya in aaney uur qaadin balse aan isticmaalin waxa looga hortago, maalin walbo waxaa dhinta ilaa 800, weliba arrimo la daaweyn karo inta uurka lagu sido ama xilliga dhalmada, ilaa 33,000 ayaa lagu qasbaa guurka halka sanad walbo 4 million loo gudo qaab fircooni ah. Shirkan oo inta badan haweenka lagu awood siinayo, waxaa iska kaashanaya Kenya, Denmark iyo ururka UNFPA
Soomaaliya malahan siyaasad la xiriirta xadiditaanka taranka, caafimaadka galmada iyo arrimo badan oo shirka looga hadlayo, waxaana jooga wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka, wasaaaradda caafimaadka iyo hey’ado kale oo dowladda Soomaaliya uga wakiil ah arrimaha la xiriira qoyska iyo caafimaadka, matali kara, ugana aqoon badan madaxweynaha, ee waa maxay sababta uu madaxweynaha u aaday Kenya?
Tan iyo February 2019 ma fiicneyn xiriirka Kenya iyo Soomaaliya, Villa Somalia waxaa ay Goobjoog New u sheegtay madaxweyne Farmaajo markii uu tagayey Koonfur Afrika bishii May ee sanadkan inuu diiday marista Kenya, isaga oo ka degay Tanzania, waxaa kale oo shirarkii ay Soomaalida u tagi jirtay Nairobi loo wareejiyey Adis Ababa, Haddaba, maxaa isbadalay?
Villa Somalia waxaa uu muuqato iney kala hadleyso, isna badashay siyaasadeeda la xiriirta Kenya wixii ka dambeeyey shirkii qaramada midoobey ee New York kolkaas oo xogheyaha qaramada midoobey u sheegay madaxweyne Farmaajo inuu aqbalo wada hadal ku aadan badda.
Mareykanka, Ingiriiska, midowg Yurub iyo Afrika ayaa iyaguna ku cadaadiyey Farmaajo inuu wada hadal la galo Kenyaatta si wada hadal loogu dhammeeyo muranka badda ee kala dhaxeeya Kenya.
Shirkan oo 3 maalin socon-doona waxaa lagu wadaa in shir dooceed ah uu dhex maro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo midka Kenya Uhuru Kenyatta, arrinta ugu muhiimsan ee looga hadlayo waa badda, Kenya ujeedkeeda waa mid cad waana in kiiska laga soo celiyo maxkamadda ICJ.
Trump Oo Iran Ku Eedeeyay Inay Ma’suul Ka Tahay Xasilooni Darada Ka Jirta Bariga Dhexe
War Saxaafadeed:Siyaasadda Qaran ee Arrimaha Dibadda
Maxay Ka Wada Hadleen Madaxweyne Farmaajo Iyo Antonio Guterres?
Kaba soo qaad in Uhuru Kenyata uu Farmaajo u soo jeediyay qorshahan ka kooban saddexda rac:
A. Ninyohow aan kaa hor leexiyo Axmed Madoobe. Adiga qof aad si’ weyn ugu kalsoon tahay u dhiibo jagada madaxweynenimada Jubbaland.
B. Kenya waxay beesha aad ka dhalatay ka dhiganeysaa saaxiibka kowaad oo lagu tallaalayo halka ay maanta joogto Beesha Axmed Madoobe, taasoo aan masraxa ka saareyno.
C. Kenya waxay kugu taageraysaa (abaabul ahaan iyo dhaqaale ahaanba) inaad ku guuleysatid tartanka doorashada madaxweynenimada ee kugu soo fool leh bilowga sannadka 2021.
Farmaajow, taageeradaas saddexda rac ka kooban ee Kenya waxaad ku heli kartaa adigoo sameeya hal arrin oo iska sahlan:
— Kuma lihi bad Soomaaliyeed Kenya u saxiix oo ka noqo dadaalka ay dawladdaadu ugu jirto inay baddaas u soo dhiciso Soomaaliya.
— Kuma lihi badda Soomaaliyeed u hibee Kenya.
Keliya waxaad oggolaataa in dacwada badda lagu dhammeeyo meel aan aheyn maxkamada Hague ay hadda hortaalo. Waxaad oggolaataa keliya in dacwada badda sulux iyo wanaag iyo saaxiibtinnimo iyo wadahahadal lagu dhammeeyo, sida ay kuu soo jeediyeen saaxiibbadaa: Siisiga Masar, Abbiy-ga Itoobiya, Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika iyo Madaweynihii hore ee Koonfur Afrika.
Warqaddas yar ii qor, aniguna waxaan kaa ballan qaaday inaan kuu fuliyo saddexda ballan ee kala ah:
A. iyo B. Iyo C. ee kor ku taxan.
Iyadoo la ogsoon yahay inay intaas jirto, weyddintu waxay tahay:
Farmaajo ma diidi karaa qorshahaas geedeysan oo weliba malabeysan?
WAA TAA WEYDIINTU.
SIda ay aniga ila tahay arrinkan Farmaajo dabcan tolkii buu kala tashanaya ee keligii go’aan kama gaarayo.
Waxaa miisaanka saaran waa: Mustaqbalka tolkii oo la hagaajinayo iyo madaxweynenimada oo loo cusbooneysiinayo afar sanoo kale.
Reer Gedo maxay ku talin doonaan. Farmaajo go’aan noocee ah buu gaari karayaa?
Inta aadan ka jawaabin weydiintan masiiriga ah, tixgeli:
In Gedo ay tahay dhul abaareed oo noloshuna adag tahay.
In dawladda Kenya cadaw u aragto beesha ugu tunka weyn gobolka Gedo aadna u takoorto, ciriiri badanna saarto.
In Maxamed Siyaad Barre uusan weligii wax muuqda u qaban gobolkas.
In Farmaajo uu yahay madaxweynihii labaad ay reer Gedo ku yeeshaan hoggaaminta qaranka Soomaaliyeed.
Sida ay la tahay qoraha maqaalkan, arrimaha kor ku xusan oo dhan waa wax dhacay oo uu Farmaajo maanta dhex maquurayo. Maaha wax malawaal ah.
Waxaana u daliil ah in codsigii hore ee Kenya uu ahaa in dacwada dib loo dhigo ilaa hal sano. Taa lagama yeelin oo laba bilood baa dib loo dhigay.
Mar kale ayey Kenya weydiisatay in dacwada dib loogu dhigo.
Caadiyan, sida lagu yaqaan maxkamadaha, codsiga kale ee dambe waxay aheyd in Kenya la siiyo muddo ka yar tii labada bilood aheyd. Matalan in dib loogu dhigo bil kale amaba bil iyo bar. Haddase siddeed bilood (8 months) baa dib loogu dhigay Kenya.
Amuurtan dibu-dhigidda siddeeda bilood ah maaha wax caadi ah. Waa wax ay oggolaatay Dawladda Soomaaliya. Si’ kastoo loo qariyo ama loo inkiro. Sideedabana, qaris waa khiyaano bilowgeed. (Secrecy in similar cases as this often denotes treason).
Waaya-aragnimadeyda gar-yaqaannimada ah baa intaas ii iftineysa.
Dibu-dhigidda madasha dacwada badda ay Maxkamadda Caddaaladda ee Caalamiga ah ay 8 bilood dib u dhigtayna, waxay marag u tahay in Farmaajo uu farafareyn ku bilaabay dacwada baddii Soomaliyeed. Farafareyn bilaabatayna waa adag tahay si’ loo joojiyo.
Famaajo madaxweynenimadiisa iyo danta tolkii miyaa kala weynaatay difaaca baddii Soomaaliyeed?
Waxse halis weyn ah oo laga yaaba inay ka hoos baxdo Farmaajo oo aan aqoon iyo waaya-aragnimo u laheyn shuruucda maxkamadaha, in maalintii uu saxiixo warqadda ah in dacwada dib looga soo celiyo Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda (ICJ) ee ku taal magaalada Hague ee dalka Holland, maalintii uu Farmaajo oggolaado in dacwada badda lagu dhammeeyo maxkamadda dibeddeeda, UHURU KENYATA wuu ka noqonayo saddexda ballan oo Farmaajo lagu hawl geliyay. Dacawadana dib loogu ma celin kari doono maxkamadda ICJ (International Court of Justice). Fudeydka Farmaajo iyo xanuunka xagga maskaxda ee autism-ka ah ee lagu xanto, baa taas suurtagal ka dhigeysa.
FARMAAJANA WUXUU KU DAMBEYN DOONAA MID IF IYO AAKHIRABA LUMIYAY: (khasira-dunyaa wal aakhira daalika huwal khasraanul mubiin.).
Allow ka yeel inaan qaldanahay, uu Farmajana yahay diric waddani ah oo aan la loodin karin. Inkastoo hadda la loodiyayba, markii uu Kenya u oggolaaday siddeed bilood (8 months) oo ah dibu-dhigid dacwo.
Haddii hanqaltaagga xunee Farmaajo uu run yahayna, Allow sharkiisa iyo shiqoolladiisaba isaga ku rog.
Soomaali meel kastoo ay joogtaba ha tashato. Baddii Soomaaliyeed, sida muuqata waa sii
Alxamdulillaahi Rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa Nabiyyanaa Muxammad.
Waxaan kaaga mahad celinayaa garyaqaan Abdulqadir Tallman fikirkaaga Cajiibka. Waxaan Allaah kabayayaa inuu Ilaahay noo aqbalo ducadaada, oo muhiimadeeda ay ahayd Ilaahayoow haduu Farmaajo saxan yahayna nagu wad wadadaa haduu khaldan yahayna Rabbiyoow naga qabo sharkiisa iyo bukmigiisa Allaahumma aammiin.
Mudane garyaqaan waajibkaaga intaa kasii badi oo telefishinnada kahadal aad baa laguugu baahan yahay.
Ummadan 30ka sano iyo kabadanba godka kusii socota kasoo qabo intaad awoodo.
High Quality Literature Review Papers says:
Purchase Lasix Comprar Levitra Farmacias Andorra Buy Phenergan Online [url=http://cialibuy.com]Buy Cialis[/url] Viagra Price List Bentyl Purchase C.O.D. Fedex Delivered On Saturday Priligy Dapoxetine In The U.S
Buy Nexium From Mexico [url=http://cialibuy.com]Cialis[/url] Dosis Levitra Cialis Resistant To Amoxicillin
Cialis Erboristeria [url=http://buyciaonlinex.com]Buy Cialis[/url] Cialis J En Ai Pris generic cialis Cephalexin And Pain In Calf
cheap herbal viagra free cialis buying cialis online uk
Amoxicillin Price Express [url=http://abuycialisb.com]Buy Cialis[/url] Canadian Pharmacy Cialis 5 Mg canadian pharmacy cialis 20mg Ou Acheter Du Cialis Moins Cher
Leave a Reply to MatCero Cancel reply
Trump Oo Booqasho Ku Tagay Japan, Kana Hadlaya Arrimaha Waqooyiga Kuuriya
Kaydka Goobjoog Select Month February 2020 (178) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
cheapest price on levitra the cost of cialis generic viagra...
wild relationship generic viagra sales therefore turn cheap...
discount generic cialis 20mg real cialis online with paypal...
buy cialis online no prescription cialis ingredient cheap re...
hot teen lesbian sex [url=https://raecompteattouta.tk]teen g...